Sajhasabal.com | Homeकुखुरा मारिएकोमा पूरै सहर स्तब्ध, प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाहीको माग
विजय जुलुसमा हिँडेकाे मिनी ट्रक दुर्घटना, ६ जना गम्भीर घाइते
पुर्व मन्त्री हृदयेश त्रिपाठिको उम्मेदवार हारे त्रिपाठिको वडामा
तौल कम गर्न प्लास्टिक सर्जरी गराउदा २१ वर्षिया नायिकाको मृत्यु
पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेस र उपमेयरमा माओवादी विजयी
धरानमा मतगणना स्थगित, सुरक्षाका लागि सेना परिचालन
काठमाडौँ वडा नम्वर २८: केशव स्थापितलाई सुरुवाती अग्रता
धनगढीको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हमालको झण्डै तेब्बर मतले अग्रता
पिकअप र बस ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, चालकसहित दर्जन घाइते
निर्वाचन आयोगले दियो बढीमा पाँच दिनभित्र मतगणना कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन
कांग्रेस मुगुका सभापति शाही सवार गाडी दुर्घटनमा
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै सरकारले बढायो सार्वजनिक सवारीको भाडा
गणक र कांग्रेस प्रतिनिधि बीच विवाद भएपछि तिलोत्तमामा मतगणना अवरुद्ध
ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ, कति पुग्यो?
झनै बलियो बन्दै डलर, नेपाली मुद्रा अहिलेसम्मकै कमजोर स्थितिमा
८४ अंकले घट्यो सेयरबजार, कुन कम्पनीका लगानीकर्ताले कति गुमाए ?
सुनको मूल्यमा उच्च गिरावट, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
हेर्नुहोस् आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर, कुन मुद्रा कतिमा खरिद-बिक्री?
यौन दुर्व्यवहारकाे आशंकामा बेलायतकाे कन्जरभेटिभ पार्टीका सांसद पक्राउ
चाइना इस्टर्न एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना नियोजितः अमेरिकी सञ्चार माध्यम
मारिउपोलमा सयौं युक्रेनी लडाकुद्वारा आत्मसमर्पण, रुसबाट मृत्युदण्डकाे धम्की
विदेशीहरूलाई आफ्नो अदालतमा युद्धअपराधको मुद्दा चलाउने कानून ल्याउँदै अमेरिका
Posted on: 09 May, 2022
वैशाख २६, काठमाडौँ | अमेरिकाको मिसिसिपीस्थित एक सानो सहरमा हालै एउटा कुखुरा मारियो । कुखुरा मारिएसँगै १८ हजार जनसंख्या भएको सहरमा तहल्का मच्चियो । पूरै सहर स्तब्ध भयो ।
एकजना पुलिस अधिकारीमाथि कुखुरा मारेको आरोप लाग्यो र महिला प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही गर्न सहरवासीले माग गरेका छन् । भालेको नाम कार्ल थियो । कुखुरा ओसन स्प्रिंग्सको सडकमा रातदिन डुल्दथ्यो भने बिहान स्थानीय व्यक्तिका पसलसम्म पुग्थ्यो । सबै पसलेले उसलाई पानी र चारो खान दिन्थे ।
यति मात्र होइन उक्त कुखुरा फिटनेस कक्षामा पनि जान्थ्यो । कुखुरा यतिधेरै मिलनसार थियो कि मानिसहरुसँग गएर तस्वीरका लागि पोज समेत दिन्थ्यो । बेलाबेलामा सहरमा यत्रतत्र गएर रेलिङमा सुतेको देखिन्थ्यो ।
केही दिनअघि कार्ल एक्कासी गायब भयो । एक प्रकारले उसको अपहरण भयो । एक महिला पुलिस अधिकारीले उक्त कुखुरालाई अपहरण गरेर मारेको आरोप लागेको छ । मारिएको कुखुरा अहिलेसम्म फेला परेको छैन ।
त्यसपछि बालबालिकाहरुले कार्लको यादमा प्रेमपत्र लेखे र पूरै सहरका ढोकाढोकामा टाँसिदिए । स्थानीय कलाकारले कुखुराको सम्झनामा भित्तेचित्र पनि बनाए ।
कार्ल बस्ने गरेको टाटु पार्लरका टाटु आर्टिस्टका अनुसार अप्रिल २५ मा जब उनी आफ्नो पार्लरमा पुगे त्यहाँ कार्लको अत्तोपत्तो थिएन । दुई चार दिनसम्म पनि कार्ल घर नफर्किएपछि उनले कार्ल कुखुराको खोजी सुरु गरे ।
सीसीटीभी फुटेजमा चाहिं अप्रिल २४ को बिहान ३ बजे तीन जना पुरुषसँगै एक महिला आएर कार्ललाई समातेर लगेको देखियो । फुटेजमा देखिएकी महिलाको नाम केन्द्र शफर हो । उनी एक प्रहरी अधिकारी हुन् । सीसीटीभी फुटेजमा शेफरले लगेको करिब १५ मिनेटपछि कार्ललाई मारेर पार्किङमा डम्प गरेको देखिन्छ ।
त्यसको एक घण्टापछि एक जना पुरुष आएर कुखुराको शरीरलाई प्लास्टिकको थैलीमा हालेर लगेको देखिन्छ । उक्त घटनापछि पशु क्रूरताको मुद्दामा शेफरलाई प्रहरीले सूचना जारी गरेको छ र जागिरबाट पनि निकालिदिएको छ ।
यो हो विश्वकै अग्लो परिवार